[Xog Xaasaasi Ah]:-Khilaafkii Khaliijka Oo Soomaaliya Ka Soo Labo Kac-leeyay
Tuesday May 08, 2018 - 16:22:18 in Wararka by Abdi A.
Muqdisho-(Caalami-News)-Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa dhaliilay siysaasadda dowladda federaalka ee ku aaddan khilaafka Khaliijka. Wuxuu ku eedeeyay dowladda inay ka weecatay mowqfikii ay horay u qa
Muqdisho-(Caalami-News)-Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa dhaliilay siysaasadda dowladda federaalka ee ku aaddan khilaafka Khaliijka. Wuxuu ku eedeeyay dowladda inay ka weecatay mowqfikii ay horay u qaadatay ee dhexdhexaadnimada.
"Arrinta khaliijka dowladdu dariiq sax ah ma ahan waxa ay ku dhaqmayso, ama dib ha uga noqoto go'aankeeda, annaga haddii aynu nahay Jubbaland, dowladda Soomaaliya waxtarkeeda maanta Imaaraadka ayaa nooga wacan." ayuu yidhi Axmed Madoobe.
Badhtamihii Abriil, Soomaaliya iyo Iimaaraadka waxay joojiyeen iskaashigii milateri. Tan iyo 2014, Iimaaraadka Carabta wuxuu tababaray oo mushaar siinayey askar Soomaali ah oo Muqdisho joogta, wuxuuna Puntland ka dhisay ciidan burcad badeedda la dagaallama. Boqollaal hub ah ayaa laga bililiqaystay xarunta tababarka ee Muqdisho markii la xirayey.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo mar uu ku sugnaa Cadaado